Sideed Ku Cabiri Doontaa Saamaynta Algorithm Raadinta Mobile-ka? | Martech Zone
Sideed Ku Cabiri Doontaa Saamaynta Algorithm Raadinta Mobile-ka?
Waxaan soo dhejinnay wax ku saabsan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah iska ilaali luminta weyn ee taraafikada raadinta adoo adeegsanaya raadinta moobiilka ee Google imanaya toddobaad kadib. Saaxiibadeena gShift waxay si dhow ula socdeen isbeddelada oo aad ayey u daabaceen si qoto dheer ugu dhejiya saameynta la filayo isbedelka algorithm.
Si loo cabiro dareenka suuqa isla markaana loo ururiyo fikradaha ku saabsan isbadalkan muhiimka ah, gShift waxay baaritaan ku sameysay in ka badan 275 suuqeyaal dhijitaal ah oo ku baahsan warshado kala duwan oo ay ku jiraan tafaariiqda, safarka iyo baabuurta. Waxaan wadnay sahankan inta udhaxeysa Maarso 25 - Abriil 2 iyo in kabadan boqolkiiba 65 kaqeybgalayaashu waxay ahaayeen go'aan qaadayaal heer sare ah cinwaano udhaxeeya Agaasime ilaa CMO Jawaabaha aan helnay waxay muujiyeen aragtiyo xiiso leh oo ku saabsan sida xirfadleyda warshadaha ay isugu diyaarinayaan isbedelka 21-ka Abriil.
Arrin xiiso leh, in ka badan kala badh dhammaan suuqleyda dijitaalka ah waxay rumeysan yihiin in saameyntu ay noqon doonto mid la taaban karo… laakiin waxaa ka sii walwal badan in kuwa ka ganacsada dhijitaalka ah aysan dhab ahaantii heysan qaab ay ugu kuur galaan saameynta. gShift barnaamijkeeda joogitaanka websaydhka wuxuu kormeeraa qiimeynta boggaaga ee raadinta moobiilka.
Waxaad sidoo kale u diyaarin kartaa shirkaddaada isbeddelka algorithm ee moobiilka Google ee 21-ka Abriil ee loo yaqaan 'gShift' shaqsiyeed Warbixinta Mobile SEO Benchmark ee ku saabsan sida joogitaankaaga webka uu hadda ugu jiro desktop iyo mobile. Hubi inaadna kaheleyso bandhig barnaamijkooda - waa wax cajiib ah!
Tags: april 21google raadinta moobiilkaalgorithm raadinta mobilada googleshixnadqiimeynta wareegaraadinta moobiilkaseo mobile
Buzz, Viral ama Ereyga Af Suuqgeynta: Waa maxay farqiga u dhexeeya?
Naafee Nacaybkaaga? Malaha Waa Jacaylka Ku Jeclaada!